Tag: chigadzirwa tsvaga | Martech Zone
Tag: chigadzirwa kutsvaga
Ecommerce Zvichemo Rondedzero: Iyo Yekupedzisira Inofanirwa-Haves yeYako Yekutengesa Chitoro
China, June 29, 2017 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Chimwe chezvakakurumbira zvinyorwa zvatakagovana gore rino rave redu rakazara webhusaiti maficha ekuongorora. Iyi infographic ndeye inonakidza kuteedzera neimwe huru agency iyo inogadzira inoshamisa infographics, MDG Kushambadzira. Ndeapi e-commerce webhusaiti zvinhu akakosha zvakanyanya kune vatengi? Ndezvipi zvigadzirwa zvinofanirwa kutarisa nguva, simba, uye bhajeti pakuvandudza? Kuti tizive, isu takatarisa kune dzakawanda ongororo dzichangobva kuitika, mishumo yekutsvaga, uye mapepa ezvidzidzo. Kubva pakuongorora ikoko, takawana izvo